बौध्दिक तानाशाहहरुबाट मुक्ति कहिले? | Nepal Polity
बौध्दिक तानाशाहहरुबाट मुक्ति कहिले?
Posted on January 16, 2015 by Nepalpolity
यो रौरव नर्क भन्दा घोर संक्रमणकाल निम्त्याउने पनि यिनै बौध्दिक तानाशाह हुन।
नेपाल अहिले बौध्दिक तानाशाहहरुको अत्याचारबाट थिलथिलो भएको छ। विभिन्न नाममा, विभिन्न बहानामा सर्वसाधारणका साखुल्ले भएर तिनै सर्वसाधारणको शोषण गरेर इज्जत, धन, पद प्राप्त गर्ने यस्ता तानाशाहहरु आफूलाई नागरिक समाजका अगुवा भन्न वा भनाउन रुचाउछन्।
उनीहरुले भनाउन खोजेर भनिएको नागरिक समाज कहिले तथा कसरी गठन भयो? त्यो नागरिक समाज भित्र सर्वसाधारण पर्दछन वा पर्दैनन? यसको जवाफ दिने उत्तरदायित्वबाट उन्मुक्त यस्ता नागरिक समाजका अगुवाहरुको कार्यले सर्वसाधारण जनतालाई कुनै प्रतिकूल असर नपरे त ठीकै छ तर उनीहरुको कामले जनतालाई असर परेमा जनताप्रतिको उत्तरदायित्वबाट किमार्थ पनि उन्मुक्ति दिन सकिँदैन।
कोही जनता बिँउझाउने नारा दिन्छन, तर साथसाथै जनता जागेका छन भन्न पनि छोडदैनन। यसको सिधा अर्थ तिमीहरुले हाम्रो हुकुम वा सत्ता स्वीकार गर्‍यौ भने जागेका हौ नत्र भने मुर्ख हौ, भुच्चड हौ भन्न खोजेको अर्थ लाग्छ।
यसरी सर्वसाधारणको बेईज्जत गर्ने तथाकथित अगुवाहरुलाई हामी सम्मान नै गर्दछौँ भने त्यो हाम्रो असल संस्कार हो। उनीहरुले भन्ने गरेको पछ्यौटेपन हाम्रो संस्कृतिको कारण हो। उनीहरुले सिकाएको संस्कार मान्ने हो भने त कालो मोसो र जुत्ताको मालाका हकदार उनीहरुनै हुन्छन्।
मानव अधिकारको ढोल पिट्ने यस्ता बौध्दिक तानाशाहहरुको मानव अधिकारको व्याख्या पनि बुझिनसक्नु छ। आफूले काखी च्यापेका वा आफूलाई काखी च्याप्नेहरुको पसिनासम्म पनि बग्यो भने मुलुकै मानव अधिकारको अवस्था चिन्ताजनक भयो भनेर विदेशी गुहार्न तँछाड मँछाड हुन्छ। तर उनीहरुले काखी च्यापेकाहरुले सर्वसाधारणको रगतले सडकै धोए पनि मानव अधिकारको स्थिति सुध्रेको राग अलाप्छन्। कसै गरेर ढाकछोप गर्न सकेनन भने एउटा बक्तव्य मार्फत कडा विरोध जनाए पुग्छ। त्यस बक्तव्यमा कडा शव्द बाहेक अरु कुनै शव्द कडा हुँदैन।
उनीहरुले भनाउन खोजेर भनिएको नागरिक समाज कहिले तथा कसरी गठन भयो? त्यो नागरिक समाज भित्र सर्वसाधारण पर्दछन वा पर्दैनन?
उनीहरुले बिरोध गर्नुपर्ने पक्ष नराम्रो काम गरेवापत उनीहरुको तारो भएको हुँदैन। कुनै न कुनै व्यक्तिगत स्वार्थमा त्यो पक्षले आघात पुर्‍याएको हुन्छ। चाहे त्यो आफू नोकरीमा हुँदा गरेको आर्थिक अनियमितताको कारणले जागिर खोसिएको रन्को होस वा आफ्नो बाबुलाई मनोनित गरेर मन्त्री पद नदिएको रिस होस। आफूलाई सम्पूर्ण सम्पत्ति दान गर्नेको पारिवारिक बैरी साध्ने काम गरेर दान सार्थक बनाउने कार्य होस। खोज्दै जाने हो भने नागरिक समाजका अगुवा भनेर महिमा मण्डित गरिएकाहरुको यो क्षुद्र लक्ष लुकेको छैन।
चाणक्यले आफ्नो अबहेलना गरेको कारणले नन्दवंशको मुलोच्छेद गरेर मौर्यवंशको उद्भव गराएका थिए। तर, उनको यो प्रयत्नमा सर्वसाधारणलाई कुनै प्रतिकुल प्रभाव परेको थिएन। तैपनि उनको यो कुटील कामका कारण कौटिल्य नाम दिइयो।
अहिलेका चाणक्यहरुमा कुटीलता बाहेक अन्य केही तत्व बाँकी रहेकै छैन। उनीहरुका कुमन्त्रणाका कारण सर्वसाधारणको रोजी खोसिएको खोसियैछ। थातवास आज गुम्ने हो वा भोलि भन्ने संत्रासले पिरोलिएकै छन। यो सबैको जिम्मेवार भएका नागरिक समाजका अगुवाहरु सर्वसाधारणको थाप्लोमा बसेर अझै बौध्दिक तानाशाही चलाउँदैछन।
आफ्नो बोलीमा सामान्य अबरोध आउने बित्तिकै वाकस्वतन्त्रताको दुहाई दिने यी तानाशाहहरु सर्वसाधारणको चुँइक्कसम्म नसुन्नेमात्र होइन बरु उनीहरुको आवाज कसरी थुनिन्छ त्यो गर्न तल्लिन छन। संसारका अरु तानाशाहहरुको अत्याचार खप्न बरु सजिलो होला, केही नभए समर्पण गरेमा त वाँच्न सकिएला तर बौद्धिक तानाशाहले जन्माएको परिस्थितिले जनतालाई काँहि छोडदैन। सुतिराखेको घरमा नै आगो लगाउनेहरुको शिकार हुनु परोस वा बन्दको चपेटामा परेर सवारी साधन सँगै यस्ता कौटिल्यका यज्ञमा आहुती बन्न परोस। कसैलाई काँही पनि उनीहरुको रापले छोडदैन।
सर्वसाधारणलाई भुल्याउने मिठाईकोरुपमा संक्रमणकालको दुहाई दिने यस्ता तानाशाहलाई यो रौरव नर्क भन्दा घोर संक्रमणकाल निम्त्याउने पनि यिनै बौध्दिक तानाशाह हुन। संसारमा काँहि पनि बौध्दिक तानाशाहहरुको अलिकति पनि असर रहुन्जेल त्यसठाँउका सर्वसाधारणको कुनै पनि कुरा सुरक्षित छैन। मान, धन, परम्परा, धर्म वा संस्कृति मात्र नभएर ज्यानसम्म सबै कुरा यस्ता बौध्दिक तानाशाहको सानो भन्दा सानो स्वार्थको वेदिमा स्वाहा हुन कुनै बेर लाग्दैन। हिजो बेलुका आफ्नो भनेर सुतेको ओछ्यान आज बिहान खोस्न उनीहरु सक्षम छन, जन्मेर हुर्केको आफ्नो कर्मथलोबाट कुनै पनि बेला लखेट्न उनीहरुले कुनै खासै परिश्रम गर्नु पर्दैन।
आफ्नो बोलीमा सामान्य अबरोध आउने बित्तिकै वाकस्वतन्त्रताको दुहाई दिने यी तानाशाहहरु सर्वसाधारणको चुँइक्कसम्म नसुन्नेमात्र होइन बरु उनीहरुको आवाज कसरी थुनिन्छ त्यो गर्न तल्लिन छन।
धर्मात्माले मात्र देख्नसक्ने लुगा बनाएको बहानामा ठग्ने कथाका ठगहरु झै घाम झै छर्लङ्ग, मुर्खले पनि बुझ्ने जस्ता कुरा अगाडि सारेर सर्वसाधारणको मुर्ख देखिन नचाहाने कमजोरीको फाइदा उठाउने गर्दछन। विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरुको योग्यताको मापदण्ड बनाउने ठेक्का जबरजस्ती लिएका स्वधोषित अगुवाहरुको आफ्नो मापदण्ड भने के हो त भनेर कसैले सोध्ने हो भने उनीहरुसँग जवाफ छैन।
मुलुकको आजको दुर्दशाको जिम्मा इतिहासदेखि नै कसको कत्ति भनेर लेखाजोखा गर्ने हो भने यस्ता बौध्दिक तानाशाहहरुको हिस्सामा पर्ने भाग संभवत अन्य भन्दा धेरै ठूलो होला। मल्लकालका प्रधान समेत संलग्न गर्ने हो भने त अरुको हिस्सामा पर्ला वा नपर्ला सोच्नै पर्दछ। अझ कयौं विद्यावारिधीहरुको अभिनव र मौलिक विषय नै हुन्छ।
2606 Total Views 1 Views Today
This entry was posted in Nepal by Nepalpolity. Bookmark the permalink.
One thought on “बौध्दिक तानाशाहहरुबाट मुक्ति कहिले?”
Rabi Raj Thapa on March 3, 2015 at 10:51 am said:
एकदम सटिक र सहि बिश्लेषण।
लेखकलाई बधाई तथा धन्यवाद।